Bollywood:- Maxay Tahay Sheekada Hadal Heynta Abuurtay Ee Jilaagan Halyeeyga Noqday ? | Gaaroodi News
Bollywood:- Maxay Tahay Sheekada Hadal Heynta Abuurtay Ee Jilaagan Halyeeyga Noqday ?
March 29, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Mukesh Rishi waa jilaa caan ah oo muddo dheer kasoo shaqeeyay filimada shirkadda Bollywood-ka ee Hindiya, wuxuuna si gaar ah magac ugu leeyahay kaalimaha loo yaqaanno “laadarka”
Wareysi uu dhawaan bixiyay atoorahan ayaa abuuray hadal-heyn aad u ballaaran kaddib markii uu shaaca ka qaaday in uu dhibaato iyo culeys badan kasoo maray xirfaddiisa, isagoo heer aad u hooseeya kasoo billaabayna ay u suuragashay inuu noqdo halyeey.
Xiddiggan ayaa ka sheekeeyay qaabkii isagoo aan wax garab ah heysanin uu kusoo galay filimada, dhowr jeerna uu ugu hungoobay billowgii hore.
Dhowr filim oo uu ka qeyb galay ayuusan wax faa’iido ah ka helin.
“Ugu horreyn waxaan sameeyay koorsooyin jilista filimada ah, kaddib waxaan helay xoogaa xayeysiimo ah. Waxaan isku dayay inaan kaalin ka helo filimka Tipu Sultan. Waxaan kharash ku bixiyay inaan ka noqdo laadar, laakiin iima suuragalin in aan xirfaddeyda ku hormariyo,” ayuu yidhi Mukesh.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ka sheekeeyay filim kale oo uu atoore ka ahaa Sunny Doel, isagana cadow looga dhigay: “Muddo kaddib Filimka uu hormuudka ka ahaa Sunny Doel ee Champion ayaa la ii soo bandhigay inaan laadar ka noqdo, laakiin kaasna kuma aanan guuleysanin.” Mukesh Rishi wuxuu hadda inta badan soo jilaa filimada ku baxa luuqadaha Tamil iyo Telugu
Filimkii Gardish ee soo baxay sanadkii 1993-kii ayaase noqday nasiibkiisa fiicnaa.
“Ugu dambeyn waxaan helay Gardish. Waxaan la kulmay Ravi oo kaddibna i baray Priyadarshan iyo filim soo saareyaal kale, sidaas awgeedna waxaan billaabay guulihii waaweynaa ee xirfaddeyda jilitaanka,” ayuu yidhi Mukesh Rishi.
‘Kama soo jeedin qoys filimada jila’
Maadaama uu Mukesh garab la’aan ku ahaa raadinta xirfadda filimada, wuxuu ku khasbanaa in uu ka galo qeybta laadarnimada, sababtoo ah wuu yaraa jaaniska uu ku heli karay in atooraha koowaad laga dhigo.
Markii Mushesh la weydiiyay culeysyadii uu lasoo kulmay markii uu kusoo biiray Bollywood-ka ayuu sheegay in uu waayay wax caawinaad ah.
“Caqabaduhu way badnaayeen, sababtoo ah aniga kama aanan soo jeedin qoys filimada jila dad ehel ahna iiguma jirin xirfaddaas. Mararka qaar waxaan toos u tagi jirnay xafiisyada filim soo saareyaasha, laakiin nasiib wanaag waligeey si xun la iilama dhaqmin marka aan xafiisyada shaqo u doonto,” ayuu yidhi.
Aamir Khan ma wuxuu u ahaa nasiib?
Mukesh wuxuu wareysigan maalmihii lasoo dhaafay la hadal hayay ku sheegay in qof walba uu qof kale kusii baranayay ilaa markii dambe uu la kulmo jilaaga caanka ah ee Bollywood-ka, Aamir Khan.
“Maalin anigoo qof kale la kulmaya ayaan arkay Aamir Khan, wuxuuna ii soo bandhigay inaan kaalin ka qaato filimkiisa Baazi. Intii aan jileynay Baazi ayuu soo hadal qaaday filim kale oo lagu magacaabo Sarfarosh, kaasna waan ka helay door. Markii aan Sarfrosh dhammeystirnay, dadka waxay billaabeen inay si iskood ah ii soo raadsadaan iyagoo shaqo filim jilitaan ah ii soo bandhigaya.”
Mukesh oo ilaa hadda si xowli ah u wada xirfadda jilitaanka wuxuu sannadihii dambe ku biiray filimada ku baxa luuqadaha Tamil iyo Telugu, kuwaasoo uu hadda soo sameeyo.
Filimada uu hadda sameynayo Mukesh waxaa ka mid ah mid Punjabi ah oo lagu magacaabo Needar, wuxuuna filimkan kusoo bandhigayaa wiilkiisa oo billaabaya xirfadda jilitaanka.
Jilayaasha ay saaxiibbada dhow yihii Mukesh waxaa ka mid ah Amitabh Bachchan, oo ay filimo badan isla soo sameeyeen, ilaa haddana ku howlan yihiin kuwo kale oo ay ku wada jiraan.
Sababta ay sheekada jilaagan hadal heynta u dhalisay ayaa lagu tilmaamay in muddooyinkii lasoo dhaafay ay soo baxayeen warar ku saabsan in shirkadda Bollywood-ka uu ka jiro qof jecleysi, ama ay dad gaar ah saameyn ku leeyihiin